Niknayman: ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို အတွင်းမှာရှာ (ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၃)
ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို အတွင်းမှာရှာ (ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၃)
ဆရာလုပ်နေသည်ဟု မယူဆစေချင်ပါ။ ရင်ထဲမှ ပေါက်ဖွားလာသော စေတနာကို မြင်စေချင်ပါသည်။ မသိသူများဟု ယူဆ၍ ရေးနေခြင်းမဟုတ်။ (သိသူများ၏) သိပြီးသား အသိပညာတွေကို ပြန်၍ အစဖော်နေခြင်း သာ ဖြစ်ပါသည်။
နအဖသည် ပညာဥာဏ်ကြီးသူများကို အလွန်ကြောက်သည်။ သူတို့က ပညာဥာဏ်မဲ့သူ (ဗာလာနံ) လူမိုက်တွေ ဖြစ်နေသည့်အတွက် (ပညာကို ကြောက်သည်။ ပညာမရှိ။) ထို့ကြောင့် လက်နက်ကို အားကိုးသည်။ ခွန်အားကို အားကိုးသည်။
အကြမ်းဖက်ခြင်းကို (၉၆) ပါး ရောဂါ ကုစားစရာဆေးအဖြစ် သုံးနေကြသည်။ ဒါ လူမိုက် လက္ခဏာ များပင်။
ဆိုသည့်အတိုင်း အများအတွက် မိမိအသက်ကို စွန့်ဝံ့တဲ့ ဘုရားအလောင်း မျောက်မင်းလို ပညာရှိ ခေါင်း ဆောင်များ၏ ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ပြည်သူအများ အသိဥာဏ်နိုးကြား၍ ခေါင်းထောင်လာမည်ကို အလွန် ကြောက်သည်။ အမှားပေါင်းစုံ ကျူးလွန်ထားသူပီပီ ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ် လန့်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦး၊ ကိုမင်းကိုနိုင် . . . အစရှိတဲ့ . အများအတွက် မိမိတို့ရဲ့ အသက်
တွေ၊ ဘ၀တွေကို စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ ပညာရှိခေါင်းဆောင်များကို (ဗာလာနံ - နအဖ) တို့က ချုပ်နှောင် ဖမ်းဆီး ထားပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ပျောက်အောင် လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် သူတို့လိုရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယူ ဆကြသည်။
ဒီ လူမိုက်တွေ ပြည်သူလူထုကို အထင်သေးလွန်းသည်။ သူတို့က လူမိုက်များပီပီ ရုပ်ဝတ္ထုများကိုသာ မြင်တတ်ကြသည်။ (ပုဂ္ဂိုလ်/ရုပ်ဝတ္ထု) များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါ်စု၊ ….. ကိုမင်းကိုနိုင် တို့မရှိလျှင် လူထုကြီးတွင် ခေါင်း ဆောင်ကောင်း မရှိနိုင်တော့ပြီ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မရှိတော့လျှင် ဒီ ဗမာနိုင်ငံကို သူတို့ လူမိုက်တွေ ထင်သလို ခြယ်လှယ်နိုင်မည်ဟု ထင်နေကြသည်။ အလွန် သနားစရာကောင်းတဲ့ နအဖ ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာဥာဏ်မဲ့လွန်းလှသည်။
ဤတိုင်းပြည်ကား ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဗုဒ္ဓ၏ သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့် အသက်ရှင်နေကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်များ များစွာရှိသည်ကို သူတို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အယောင်ဆောင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ မသိနိုင်၊ နားမလည်နိုင်ကြပါ။ (ဒွိဟိတ်) လူသား သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် သနားစရာ ဖြစ်နေမှန်း သိပင်မသိနိုင်ဘဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လူတော်များဟူ၍ သွေးနားထင်ရောက်နေကြသည်။
ကျနော်တို့၏ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကား ကျနော်တို့ကိုယ်စီ၏ (အဇ္ဈတ္တ) အတွင်းစိတ်သန္တာန်တွင် ရှိကြသည် ကို သူတို့မသိ …….လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများသည် အပြင်မှာ မဟုတ်ပါ။ အတွင်းမှာ သာ ဖြစ် သည်။
ဒေါ်စုကို ဖမ်းထားလို့ကော ကျနော်တို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလား …. ဦးဝင်းတင်၊ ဦးတင်ဦးတို့ကို ဖမ်း ထားလို့ကော ကျနော်တို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလား …. ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို ဖမ်းထားလို့ကော ကျနော် တို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလား ….
(ကျနော်တို့ ဒေါ်စု၊ …. ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ မရှိလျှင် ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူးလား။ ဘာမှ မလုပ်နိုင် တော့ဘူးလား)
အဓမ္မကို တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးမနေပါနဲ့။ သူတပါး၏ တွေးထင်မှုက မိမိရဲ့အမှန်တရား မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မိမိရင်ထဲက ဓမ္မနဲ့ယှဉ်တဲ့ (တရားရဲ့လား၊ မှန်ကန်ရဲ့လား၊ ဘယ်လောက်အကျိုးရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက် အကျိုးမဲ့နိုင်သလဲ) ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကိုယ်တိုင်ပြန်မေး။ ပြီးတော့ လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းမရှိလို့၊ ခေါင်းဆောင်မရှိလို့ အားငယ်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့် ရင်ထဲက ဓမ္မနဲ့ ယှဉ်တဲ့ဥာဏ်ကို ခေါင်းဆောင်တင်။ ပြီးတော့ လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှ အကောင်းဆုံးသာ လုပ်ပေတော့။
ကလျာဏအနွယ်ဝင် သူတော်စင် ပညာရှိအပေါင်းတို့ ခင်ဗျား ….. မိစ္ဆာတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ ကိုယ့်အတွင်း သန္တာန်က ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ လူတိုင်းကိုယ်စီ နိုင်ရာဝန်ထမ်းရင်း တက်ညီလက်ညီ တော်လှန်ကြပါစို့။
Posted by အာဇာနည် at 12:42 PM